To: म अझै असुरक्षित छु आमा
-सुरेन्द्र प्र. जोशी - आमा ! म गोबिन्द बोल्दैछु,
मेरो घरको भिरमाथि, दुस्मन को तिरले मलाई
र तिमीलाई पिर परेको बेला
लड्न गएको थिएँ आमा, यही वर्ष,
तिम्रा हातहरू च्यापिएका बेला,
मेरै छिमेकमा तिम्रो घर र मेरो बारी
रक्षाका लागि बसेका सुरक्षाकर्मी छँदा छँदै
मेरो शरीरमा बिदेसीको गोलीले मेरो बोलि
असुरक्षित भएको थियो आमा यही वर्ष,
ती भर्खर जन्मिएकी छोरी...
पुरूषोत्तम अधिकारी - बाहिर निस्कदै गर्दा मनमा धेरै कुरा खेल्न थाल्यो । जीन्दगीको पहिलो सासमै आफ्नै परिवारबाट तिरस्कृत ति छोरीको भविष्य के होला । अझै पनि समाजमा छोरा र छोरीबीच रहेको त्यो सामजिक कुरीतिको पर्खाल भत्काउन उनले जीवनमा कति संघर्स गर्नुपर्ला ।
चटयाङ्ग मास्टर - चुनाबै नगरे पनि आउने यिनै हुन्
जेफरी आर्चर , भावानुवादकः दण्डपाणि जैसी - अगाडि बढ्दै मन्त्रीजीले त्यो पेस्तोल मेनेजरको कन्चटमा राखे र विस्तारै भने, “मेनेजर सा’ब, मलाई कुनै पनि हालतमा ती नामहरु चाहिन्छन् । अब त तपाईले बुझिसक्नु भयो होला कि ती नामहरु प्राप्त गर्न म कुनै पनि हदसम्म पुग्न सक्छु । तपाईले दश सेकेण्ड भित्रमा मलाई ती नामहरु भन्नु भएन भने दुवैजना लाई गोलीले उडाइदिने छु, बुझ्नु भो ?”
शोभा शर्मा - केही दिनपछि पहिलो पटक ऊ मेरो नजिक अचानक आएका थियो। म शिरमा सिन्दुर हालिरहेकी थिएँ। हो कि हैन जस्तो गरी मेरो पिठमा उसले छोएर गयो। जस्तो वतासले छोएर जान्छ। त्यति मधुरो छुवाई कति गाढा बनेर मेरो तनमा पोतियो। त्यही छुवाईले मलाई तनवीरको सम्पूर्ण जीवनमा प्रवेश गर्न तानिरह्यो। त्यही छुवाईको डोरीले कसेर मलाई दिवानी बनायो। र, सायद उसलाई पनि!
कुलराज पौडेल - मन, शरीर र व्यवहारलाई ठिक पार्दै उलेख्य प्रगतिका लागि दैनिक ज्ञान, गुणको विकास गर, खोजी कायम राख । जीवनलाई कलात्मक बनाउ, हरेक आवश्यकतालाई समय देउ, हरेकभित्र उसैको बास छ । तिमी दुःखी भए उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ, खुशी भए उहाँ खुशी हुनुहुन्छ। तिमी आफूलाई खुशी राख्नु परमात्मालाई खुशी राख्नु हो । तिमी ज्ञानी, कर्मयोगी, खुशी, कल्याणमय भयौं भने तिम्रो माता–पिता त्यसै खुशी हुनुहुनेछ त्यस्तै परमात्मा पनि ।
प्रणिका कोयू - योशा, श्रृंखु, मेधु
जाउँ तिर्थ भनेर खप्तड गुफा ती इन्द्र नै पल्कीए... (भिडियो)
सुदेश सत्याल - जाउँ तिर्थ भनेर खप्तड गुफा ती इन्द्र नै पल्कीए
यस्तो लाग्छ हिमालको जगुरमा चौरीहरु टल्कीए
पृथ्वीमै मनकामना छनी अहो यै मोक्षाको धाम हो
धर्तिनै छ रमाईलो किनभने त्यो स्वर्ग बेकाम हो
देवकी अभिलाषी - ठोक्किएर जान्छ तिम्रो तस्बिर मेरा आँखाहरुमा जबवर्षौंजस्तो लाग्ने यो रातआँखा खोलेरै निदाउँछु मजस्तो किएक सेकेण्ड तिमी मबाट टाढा हुनु पनि पृथ्वी एकपटक घुम्न बिर्सिएझैं लाग्छ मलाई।
भानुभक्त - बुवा भन्थें– जिन्दगीमा साह्रै गाह्रो पर्यो, सरसल्लाह दिने मान्छे कोही भएन भने घरका जुवाभाटासँग सोध्नु, अनि जे राम्रो लाग्छ त्यही गर्नु। एसएलसी पास भएपछि मैले कहाँ, के, कसरी पढ्ने निर्णय गर्न सकिनँ। पहिला पो बुवा थिए र सिरानीमा हाल्ने पैसा दिन्थे। बुवा नभएपछि घर खर्च चलाउन एक एक पैसाको हिसाब राख्नुपर्थ्यो।
हजुर यहाँ कोठा खाली छ कि!
डा. रविन खड्का - विद्यार्थी धेरै पर पुगिसकेको हुन्छ। डा.बस्नेत केही भन्न चाहेर पनि बोल्न सक्दैनन्। उनको मनमा अनौठो पश्चाताप मिश्रित विचार उत्पन्न हुन्छ। थचक्क सोफामा बस्दै टोलाउन थाल्छन्। सोच्दा सोच्दै उनी आफ्नो डेढ दुई दशक पुरानो अतितमा पुग्दछन्। त्यस्तै तथाकथित पाखे भेसमा पढ्न भनी शहर छिरेको, त्यसै गरी कोठा खोज्ने चक्करमा कैयौं दिन डुलेको अनि गतिलो एउटा कोठा नपाएर गरेको दृढसंकल्प सम्झछन् उनी।
डा. सुमनराज ताम्राकार - आफूले मनमनै प्लान गरेर आएको कुरा ठ्याक्कै भनिदिए जस्तो भावमा ‘हो, हो’ भने। सो कल्ड चलाखी अपनाउन सिपालु खरायोको पिसाब छुलुक्क छुल्किने गरी ७.८ रेक्टर स्केलमा सिंह द लायन पुनश्चः गर्जेर –‘पाजी मलाई मुर्ख ठानेका छौ। मैले त्यो दुई कक्षाको किताबमा छापिएको पुरानो भर्सनको खरायो र सिंहको कथा पढेको छैन भन्ठानेको ? यु रास्कल, मैले प्रौढ शिक्षा पढेको छु, ईंगलिसका लागि रैपिडेक्स बुक्स पनि पढेको छु, थाहा छ तँलाई ?’
चट्याङ बा म पार्टी खोल्दिनँ
शान्तिराम ढकाल - चट्याङ बा म पार्टी खोल्दिनँ
म उद्योगनै खोल्छु
पार्टी खोल्दा राजनीति गर्नुपर्छ
आँखा सद्धे भए पनि अन्धो बन्नुपर्छ
चलेका उद्योग धमाधम बन्द गर्नुपर्छ
त्यसैले चट्याङ बा
म पार्टी खोल्न सक्दिनँ
शिरीष कुमार मौर्य, अनुवाद- सुदीप पाख्रिन - भर्खरै थाहा पाएको हुँ मैले उनी फर्कि आएकीउनी जो हाम्रो टोलको सबैभन्दा सुन्दर युवती थिइन्अब आएकी छिन् सधैँको लागि विवाहको तीन वर्षपछि फिर्ता
शिव संकल्प - दिनहरु बित्दै गए। मेरा मानसपटलमा ती युवती र त्यो बच्चाको अनुहार धमिलो धमिलो हुँदै गयो। शायद अघिल्लो वाक्य मैले गलत लेखेँ। ती आँखाहरू धमिला हुने किसिमका थिएनन्। सुदूर मानसपटलमा गहिरो गरी कुँदिएका थिए ती।
नवीन विभास - चिठी च्यात्छन्। मेरो आफ्नै मुटु च्यातेजसरी दुख्न थाल्छ। चिठी च्यातेपछि राजा घोडा र रेडियो छाडी टाप कस्छन्। त्यसपछि बजिरहेको बाउसा’बको रेडियो पनि बन्द हुन्छ। घोडा मन्टो हल्लाउँदै हेरिरहन्छ- घरी मलाई, घरी नरेशजंग राजा गएतिर त घरी भेरी पारितिर। ‘राजा! किन च्यात्सियो? लालीको चिठी’ भनेर छाडेथे हल्काराले,’ यति भनेर चिठीका टुक्रा उठाउन थाल्छु। बाउसा’ब ओझेल पर्छन्। तैपनि प्रश्नले बाटो छेक्छ, ‘अब लालीको बैंस?’ चिठीका टुक्रा हातमा उठाएर अमूल्य उपहारझैं हेर्न थाल्छु, ‘आँखा देख्ने भए आफैंले सन्चोबेसन्चो सोध्थे हुँला छोरीले पठाएका अक्षरसित।’ जहाँ भए पनि, जे गरे नि लालीले ‘ठीक’ गरेजस्तो ‘अनौठो’ अनुभूत गरी बोलाइरहेछु- लाली!
विप्लव ढकाल - म मेरो जीवनभरिको सपना उपहार दिन चाहन्छु तिमीलाई!म आज तिमीलाई सुनाउन चाहन्छु यो कथा! तिम्रो देश यतिखेर बृद्धाश्रम बनिरहेको छ! तिम्रो देशका हरेक घरहरु रोइरहेका बृद्धाश्रम बनिरहेका छन् आज! तर म तिमीलाई मेरो समयको अर्कै कथा सुनाउन चाहन्छु!
विनिता बराल - काकीले कथा सुनाउँदा ती हजारौँ सेता परीहरुमा ऊ आफूलाई पनि कतै उभ्याउँथी। परीहरुसँगै आकाशबाट सेता हाँसमा चढेर धरतीमा ओर्लन्थी। सेतो फ्रक लगाएर, जादुको छडी बोकेर खिसिक्क हाँस्थी। सँगसँगै काकी पनि हुन्थिन्। आन्टी पनि उस्तै राम्री थिइन्। सेता लुगा लगाउँदा ठयाक्कै परीजस्तै देखिन्थिन्। बेला–बेला काकीले सेता कोट लगाएर सेतो घोडा चढी परीलाई लिन राजकुमार आएको कथा सुनाउँथिन्। यस्तो सुन्दा लुरीलाई बिछट्टै लाज लाग्थ्यो।
भानुभक्त - कोठामा पुगुञ्जेल ऊ हिँड्न सक्ने अवस्थामा थिइन। मोटरसाइकलबाट झरेर डोर्याउँदै उसलाई कोठासम्म ल्याएँ। भर्याङमा वमिट गरिदेली भन्ने कत्रो पीर। के आपत आइलाग्यो। यस्तैमा काम लाग्छ भनेर यसले मलाई साथी बनाएकी होली।
धर्म सापकोटा (राजु) - बाबाको कुरा सुनेर छोरी एकछिन मौन भई । मनमनै दोहोर्‍याई ‘ग्रीनकार्ड’। धेरैबेर सोचेपछि एकदमै आज्ञाकारी छोरी झै बनेर भनी-‘अब हजुरहरूले मन पराएको केटालाई मैले कसरी नाईं भन्न सक्छु र?’
प्रसन्न घिमिरे - चश्मा लगाएको मेरो आँखामा उही छ त्यसको रङ, उस्तै छ त्यसको सिलाई पनि खुइलिएको कतै देखिएको छैन अझै पनि उध्रिएको, च्यातिएको होला र कतै?आँखामा त आएको छैन कि फेरि चस्मामा पावर थप्नु पर्ने भएको हो?
तर, म मात्र साधारण मानिस ...
रोजर म्यागगग, (अनुवाद : सिजन श्रेष्ठ) - एक भाषणबाज भएको भए म यदिबनाउने थिएँ म सुन्दर भाषणहरूएउटा तेलको ट्याङ्करचुहिने थिएँ तिम्रा बगरहरूमा।तर म मात्र साधारण मानिसपठाउँछु म तिमीलाई त्यति मायाजति म जान्दछु।
प्रणिका कोयू - तपाईंसँग म जिकिर गर्न चाहन्न
उनीसँग तर्क गर्ने इच्छा छैन
तिमीसँग म टाढै रहन्छु; बुझ्छौ जस्तो लाग्दैन
उसलाईचाहिँ भन्दै आएको हो
'प्रेम कहिल्यै स्थायी हुँदैन'
किशोर सापकोटा - तिमीलाई केही असजिलो भएको हुनुपर्छ, पक्कै पनि मेरो घरपरिवारले के भन्लान् भन्ने तिमीलाई लागेको हुनुपर्छ। तर मैले मेरो पति र छोराछोरीलाई हाम्रो प्रेमकहानी सबै सुनाएर अनुमति लिएकी छु। यो मेरो लागि पहिलो र अन्तिम भ्यालेन्टाइन हुनेछ किनकी म ब्रेष्ट क्यान्सरको लास्ट स्टेजमा छु।
कुलराज पौडेल - नेपालबाट अग्लो, वृहत्तर र विश्वस्तरीय दर्शनको एकैपटक पार्दुभाव भएको छ । पढ्दा, बुझ्दा गहन लाग्ने तर सर्वहितकारी औषधि बराबरका ज्ञान शीर्षक र व्याख्याहरु आफैंमा अलौकिक छन् । यो अग्लो “ज्ञान पिरामिड” को नाम “सार्वभौम ज्ञान” राखिए...
विप्लव प्रतीक - म वारी यहाँ, यति टाढा बसेर कल्पना गर्दैछुत्यो पारी कोही त होलान्, केही न केही गर्दै होलान्,या कोही पहरा दिइरहेको होलाया कोही होला जो क्रान्तिको खाका कोरिरहेको होला।
एउटा प्रश्न आफैंलाई
केदारनाथ सिंह, अनुवाद- सुदीप पाख्रिन - के म राख्न सक्दछुएउटा चुँडिएको केशलाई कार्य र कारणको ठ्याक्कै बीचमामलाई कसरी थाहा हुन सक्दछमेरो भोकमा मेरो ढाड दुख्नुसंलग्न छ या छैन
म किनर कुन चाहि तर्कले हिन्दु हुँके म कहिले जान्न सक्दछु?
- सफर पोखरेल - नदी एउटा दिशामा मात्र बग्छ ।
ऊ एउटा पृथ्वी हो...
लक्ष्मी न्यौपाने - दुई दुई वटा छोरीकी आमा कसरी लेसवियन हुन्छ? हुनै नसक्ने हल्ला भनेर पत्याएकी थिइन। आज उसकै मिल्ने साथीले रोजेको जीवन जीउने मोड देखेपछि तीन छक्क परी। विनय र सत्तीश घनिष्ट साथी हुन् भन्ने राम्ररी बुझेकी सजनी कल्पनै नगरेको घनिष्टता देख्दा अवाक भई। दुवै कहिले पोखरा कहिले चितवन भनेर एक दुई दिन हराउँथे। हराउनुको रहस्य पनि बुझी। यहाँबाट अब कसरी उम्कने? कसरी छुटकारा पाउने भन्ने सोचमा तल्लिन भई। विनय र सत्तीशको चियर्सको आवाजसँगै चर्को हाँसोको फोहरा किचेन हुँदै उसको कानसम्म बज्रिरहेको थियो।
धर्म सापकोटा राजु - त्यतिबेला काठमॉंडौबाट जाडो बिदा मनाउन म घरमा आएको थिएँ। सरिता र शुरभीको एस एल सी चलिरहेको थियो। म सरिताको घरमा गईरहन्थें। उसलाई म्याथ र ईन्गलिस गाह्रो लाग्थ्यो। म उसलाई सिकाई दिन्थे। यस्तै क्रममा एकदिन शुरभी सरीताकोमा आई। शुरभीलाई त्यहॉं देखेर म खुसी भएँ। तर उ त्यहॉं धेरै बेर बसीन। तुरुन्त गईहाली। म संग त कुराकानी पनि भएन। शुरभी गएपछी सरीताले मलाई जिस्काउदै भनि- "के हो दाई शुरभी तपॉंईलाई भेट्न आई तर तपॉंई एक शब्द पनि बोल्नुभएन त। के हो केटा मान्छे भएर नी यस्तो लाछी" Comments